« Te hihavana amintsika Andriamanitra» - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Malala il y a 17 jours
Alahady Voalohany Karemy 1B
Jen. 9, 8-15; 1Pi. 3, 18-22; Mk. 1, 12-15
Fohy dia fohy ny fitantaran’ny evanjelin’i Md Marka ny fakam-panahin’i Jesoa tany an’efitra kanefa manambara tantara lava; ny Tantaram-pamonjena hatramin’ny andron’i Adama; ny tantaran’ny fanekem-pihavanana hatramin’ny andron’i Noe. Manentana ny kristianina ho amin’ny fandrosoana ara-panahy irìna ho azo mandritra izao Karemy izao ihany koa ny fahatsapana fa te hihavana amintsika Andriamanitra.
Karemy na efapolo andro mampahatsiahy indray ny fitondran’Andriamanitra Ray teo amin’ny Tantaram-pamonjena. Ny vahoaka Israely namakivaky ny taniefitra nandritra ny efapolo taona (Eks 8,2), i Moizy nijanona efapolo andro sy efapolo alina tany an-tendrobohitr’i Sinaï (Eks 34,28), ary i Elia mpaminany nandeha efapolo andro sy alina ho any Horeba hihaona amin’ny Tompo Andriamanitra (1Mpj 19,8). Tandindona ihany anefa ireny, sady fanomanana ny fahatontosan’ny Tantaram-pamonjena sy ny Fanekem-pihavanana ao amin’i Jesoa Kristy.
« Nentin’ny Fanahy ho any an’efitra i Jesoa ». Ny Fanahy Masina izay nambomba an’i Jesoa hatramin’ny nahatorotoronina Azy tao an-kibon’i Masina Maria virjiny ka hatramin’ny nanaovana batemy Azy tao Jordany no mbola miaraka Aminy amin’ny fiatrehana ny fakam-panahy. Io Fanahy io ihany koa no mitarika ny kristianina eo amin’ny fiainany isan’andro hiatrika ny fakam-panahy maro samihafa ka ahatsapana ny fandrosoana na ny fihemorana ara-panahy. Mbola io Fanahy Masina io ihany koa, mandritra izao Karemy izao, no miaraka amintsika hiroso ho any amin’ny fankalazana ilay Fanekem-pihavanana vaovao ao amin’ny Pakan’i Kristy.
« Nalain’i Satana fanahy Izy sy niara-nitoetra tamin’ny bibidia». Jesoa Kristy nifanatrika tamin’i Satana no zoky mpitari-dalana mahalala izany hoe « voan’ny fakam-panahy; azon’ny fakam-panahy ». Izy ihany koa no zoky mpitari-dalana nandresy ny fakam-panahy. Fankaherezana ho an’ny olombelona rehetra izany. Afaka mandresy ny fakam-panahy ny olombelona raha mianatra ny toe-panahin’i Jesoa miatrika ny fakam-panahy. Ireo « bibidia » niara-nitoetra tamin’i Jesoa tany an’efitra moa dia mampitamberina ny zava-nitranga tany ampiandohan’ny tantaran’ny zanak’olombelona ; ny tantaran’i Adama. Niara-nonina teo anivon’ny karazam-biby maro samihafa i Adama (Jen 2, 19-20), resin’ny fakam-panahy ny olombelona tany am-piandohana tao amin’ilay Adama taloha fa mandresy kosa ny olombelona ao amin’ilay Adama vaovao dia i Jesoa Kristy izany. Tafarina indray ny Fihavanana ao amin’Andriamanitra Ray noho ny nandresen’ilay Adama vaovao ny fakam-panahy.
« Tonga ny fotoana, ary efa akaiky ny Fanjakan’Andriamanitra ; mibebaha ianareo ary minoa ny Evanjely ». Natao an-tranomaizina i Joany mpanao Batemy. Famantarana ny fotoana hanombohany ny fitoriana ny Evanjelin’ny Fanjakan’Andriamanitra izany ho an’i Jesoa. Io no fotoana. Zava-baovao no indro miaraka amin’i Kristy nandresy an’i Satana. Fahariana vaovao toy ny tamin’ny andron’i Noe (vakiteny voalohany), izay tandidon’ny Batemy ihany koa hoy Md Piera (vakiteny faharoa). Ny Batemy no isantaran’ny kristianina izany fahariana vaovao izany ; mampiombona azy amin’i Kristy zanak’Andriamanitra ; manome azy aim-baovao sy hery vaovao avy amin’ny Fanahy Masina ho enti-miady sy mandresy ny fakam-panahy. Fomban’ny Fiangonana katolika àry ny mandray ho amin’ny « Dingana faharoa » ireo olon-dehibe hiroso amin’ny Batemy (katekomena) amin’izao fanombohan’ny Karemy izao. Hiomanan’izy ireo handray ny Batemy amin’ny andron’ny Paka.
Nanome ohatra ho anay Ianao ry Jesoa Tompo raha nifidy ny fahanginana tany an’efitra, koa mba ataovy mahita fotoana hanginana izahay handinihanay tena sy hivavahanay ary hibebahanay marina tokoa. Mivavaka ihany koa izahay ho an’ireo rehetra miomana ho raisina amin’ny Batemy amin’ny Paka.
Teny Mahavelona : « Te hihavana amintsika Andriamanitra» - il y a 17 jours
Teny Mahavelona : « Sitrana ny boka !» - il y a 22 jours